सुनचाँदीको मूल्य ह्वातै बढ्यो, हेर्नुहाेस् कतिमा हुँदैछ काराेबार ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
सुनचाँदीको मूल्य ह्वातै बढ्यो, हेर्नुहाेस् कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य ह्वातै बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत शुक्रबारको तुलनामा आइतबार सुन तोलामा अधिकतम ६०० रुपैयाँले र चाँदी तोलामा ३५ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
योसँगै आज बजारमा सुन प्रतितोला ९१ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ भने चाँदी एक हजार २३० रुपैयाँ कायम भएको छ । गत शुक्रबार बजारमा सुन प्रतितोला ९० हजार ९०० रुपैयाँ र चाँदी एक हजार १९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै, यता आज तेजबी सुनको मूल्य समेत ६०० रुपैयाँले नै बढ्दै ९१ हजार रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेपछि यहाँ पनि खाने तेलको मूल्य बढ्यो : उद्योगी
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढ्दा नेपालमा खाने तेलको मूल्य बढेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको छलफलमा खाने तेल उद्योगीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
विभागले पछिल्लो समय नेपालमा खाने तेलको मूल्यमा अचाक्ली बृद्धि भएपछि यो सम्बन्धमा बुझ्न उद्योगीहरुलाई बोलाएको थियो । सोही कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै खाने तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
यसका साथै, कोभिड–१९ महामारीका कारण ढुवानीको लागत बढ्दा समेत तेलको मूल्य बढ्न पुगेको उद्योगीहरुले विभागलाई जानकारी गराए । सोहीकारण, आफुहरुले खाने तेलको व्यापारमा कम नाफा राखेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
देशभरका १९ खाने तेल उद्योगी सहभागी छलफलमा विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले खाने तेलको मूल्य बढ्नु व्यवहारिक भए÷नभएको अनुगमन गरिने बताए ।